Spiceworks Myanmar - Page 11 of 15 - Just another WordPress site
2018-09-12 posted by Ei Phyo Mon
မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကျွန်မကတော့ Spiceworks Myanmar Co.Ltd; ရဲ့ Business Management Group မှာ Administration Assistant အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မအိဖြိုးမွန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကျွန်မ သွားဖြစ်ခဲ့ သော
2018-09-07 posted by Spiceworks Myanmar
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Spiceworks Myanmar Company မှာ Web Developer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ယနေ့ HTML5 တွင်ပါဝင်သော Canvas နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ history, useful, example
2018-08-31 posted by Spiceworks Myanmar
Scalable Vector Graphic「SVG」
Hello! I’m Thuzar San working asaWeb Designer at Spiceworks Myanmar Co.,Ltd. Today I want to share about one
2018-08-09 posted by Spiceworks Myanmar
မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ မောင်ရဲထက်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ Spiceworks Myanmar company မှာ web developer အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဒီတစ်​ပတ်​မှာ​​​တော့ ကျွန်တေ့ာ်အနေနဲ့Zend Pdf ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ code တွေကို​လေ့လာထားသ​လောက်​ရှင်းပြမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီLINKမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ https://devzone.zend.com/1064/zend_pdf-tutorial/ ပထမဆုံးအ​နေနဲ့
2018-08-01 posted by Khin Pwint Phyu Khaing
မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကျွန်မနာမည်ကတော့ မခင်ပွင့်ဖြူခိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ Spiceworks Myanmar ကုမ္ပဏီတွင် Web Developer အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အားလုံးကို ကျွန်မသိသလောက် sharing လုပ်ပေးချင်သော ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့
2018-07-20 posted by Su Yee Htun
Media Print CSS
မင်္ဂလာပါ။ ညီမကတော့ မဆုရည်ထွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Spiceworks Myanmar မှာ Web Designer အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Media Print CSS အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ တချို့ သောလူတွေနဲ့တော့ ရင်းနှီးမှုရှိနေနိုင်ပေမဲ့ တချို့သော လူတွေအတွက်တော့
2018-07-11 posted by Htay Min Khaung
OOP ( Object Oriented Programming )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ ကိုဌေးမင်းခေါင် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Spiceworks Myanmar တွင် PHP Web Developer ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ OOP လို Developer များ
2018-07-04 posted by Spiceworks Myanmar
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမျက်မှောက်ခေတ် လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား လေ့လာမှုအား ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပြီး လေ့လာပုံအား ရှင်းလင်းရေးသားဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များအနေဖြင့် ဂျပန်စာလေ့လာနေမှုများအား ယခုအခါ တော်တော်များများ မြင်တွေ့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိဘများက လေ့လာစေလို၍ ဖြစ်စေ မိမိအစီအစဉ်အတိုင်း လေ့လာချင်လို၍ဖြစ်စေ ဂျပန်စာလေ့လာမှုသည်မည်သည့်နေရာအတွက် လေ့လာသည်၊ လေ့လာပြီးနောက် မည်သည့်နေရာတွင်
လောကကြီးထဲတွင် သက်ရှိတိုင်းဟာ မွေးဖွားလာသည့်အချိန်မှစ၍ နောက်ဆုံး မသေခင်အချိန်ထိ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ အသွင်မတူသောပုံစံတွေဖြင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ရှင်သန်နေထိုင်ကြရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်း စသည့်အခြေအနေမျိုးစုံကိုလည်း သက်ရှိအားလုံး တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ သက်ရှိအားလုံး နေဝင်ချိန်မရောက်ခင်အထိ အို၊နာ၊သေ
2018-06-29 posted by Myat Min Swe
“ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုရဲ့ facility များ”
Spiceworks ကုမ္ပဏီမှကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ Web Innovative Talent Award 2018 (WIT 2018) ပြိုင်ပွဲမှာ Grand Prix ဆုရရှိခဲ့သူကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လေ့လာရေး အနေဖြင့် တစ်ပတ်ကြာ ခရီးစဉ် စီစဉ်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ WIT